Chikamu Chikamu Kuedzwa Kwemagariro, Chikamu Chehunyanzvi Therapy | Martech Zone
Svondo, Ndira 13, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Vhiki rino raive dambudziko chairo nebasa. Ndine chokwadi chekuti ndakashanda kumusoro kwemaawa zana - uye handina kuuya pedyo nekuisa dent mune yangu runyorwa rwezvinhu zvinofanirwa kuzadzikiswa.
Nekuda kwehutsanana, ini ndinowanzoedza kuburitsa zvinhu zvandinofanira kuita uye ndoita chimwe chakasiyana zvachose. Icho chikamu chehunhu hwangu - shamwari yangu Pat anoidaidza yangu vanokunda. 🙂
Vhiki kana kupfuura apfuura ndakasangana neshamwari yangu kuti tikurukure nezvekuvaka saiti nyowani asi shandisa Twitter raMwari API kunyatsoita splash. Tenzikadzi wangu mutsva ndiye Kana Suck.
Ini ndaifanira kudzidza Twitter's API, kutanga, zvakadaro. Iyi vhiki yevhiki ndakaita izvozvi. Kana Suck quirky diki yekutsvaga application iyo ichatsvaga chero chinhu chinosveta kushandisa Google. Chikamu chinotonhorera, hazvo, ndechekuti inochengetedza manhamba pane izvo zvinotaurwa nevanhu zvayamwa!
Vashanyi, kazhinji, vari kuzvibata zvakanaka. Ini ndatanga firita runyorwa rwemashoko uye zvirevo, pamwe neyekutsvagisa runyorwa rweavo IP kero iyo isingamire kuve isina hunhu. Ini ndinotenda zvakare kuseka kune vashanyi - ini ndiri chaiko pakati peiyo iPhone uye iPod Kubata. (Yakagadziridzwa kubva pakuve pakati paAnn Coulter naHillary Clinton pakutanga kwevhiki.) Uye zvechokwadi, chepakutanga unobhowa pops kumusoro nguva nenguva.
Kutumira kune iyo Kana Suck Twitter account zvaive zvakati omei. Asi chakanyanya kuomarara kwaive kuvaka nzira yekudhonza maTwitters ayo vamwe vanhu vanonyora vadzosere muIwe kana Suck webhusaiti. Kuti ndiite, ndine basa reCron rinotarisa iyo Twitter API sekondi yega yega uye zvinyorwa zvinoongorora yega yeiyo Tweets dzokera saiti, uchirekodha chero zvitsva.
Kana iwe uchida ku Twitter chimwe chinhu chaunofunga chinomwisa, ingokanda tweet kuna @ifsuck. Kana iwe uchida kutarisa izvo zvinoyamwa mukati mezuva rese uye kwenguva yese (Ron Paul is # 1), saka shanyira iyo Kana Suck.
Mawebhusaiti Anogona Kumhanyisa Akarongwa Mabasa neCron
Ndira 14, 2008 na9: 35 PM
Iyo poindi ndeyekutora izvo zvinoiswa nevanhu mukutsvaga kwewebhu uye kuvadaidza iwo akazara uye achangoburwa kuyamwa? Kana script yako ichifanirwa kutsvaga "tambo" inoyamwa, haisi kuita izvozvo. Kana ichingova hunyengeri kuti vanhu vaishandise (uye zvakanaka, zvakashanda pandiri) kuti ndione kuti kangani mamwe mazwi anopinda, saka iri kushanda.
Ini ndinofungidzira ndiri zvishoma "kongiri inoshanda" asi ini ndaitarisira kuti kana ndikaisa mu "lollipops" iyo injini yaizotsvaga mubatanidzwa we "lollipops" uye "sucks".
Uye iwe unoziva, kana iwe ukanyora zvekuyamwa kakawanda zvakakwana, zvinotanga kutaridzika kunge zvinosetsa…
Ndira 14, 2008 na9: 58 PM
Iyo chaiyo poindi, Bob, yaingova yekuvaka chimwe chinhu chakabatanidzwa neTwitter API. Ndakanga ndisati ndambozviita uye ndaida kushandisa huropi hwangu (zvishoma).
Iko kunakidzwa ndekwe kungo tarisa izvo vanhu vanofunga zvinoyamwa - kubva kuchangobva kutaridzika kusvika kune yakareba-kutarisa. Yatove nekutevera zvishoma paTwitter, apo vanhu vari kuishandisa kuratidza nezve basa, hupenyu, tekinoroji, nezvimwe.
Kuiona ndiko kunonakidza kwandiri. Kufanana nemafashama enzvimbo dzakabatana neNFL panguva yemitambo yebhora Vanhu vanga vachiburitsa kuburikidza nekushandisa!
Zvimwe zvinouya nerudzi urwu rwekushandisa. Izvi zvaingova zvekuyedza, iyo chaiyo app ichave iri shoma munzira!
Ndira 15, 2008 na3: 08 PM
Twitter Inofanira Kufa